“El-Clasico-kan waa mid gaar ah waana la dagaallami doonaa ciyaartoyda ilaa iyo heer dhimasho” –Zidane – Gool FM
“El-Clasico-kan waa mid gaar ah waana la dagaallami doonaa ciyaartoyda ilaa iyo heer dhimasho” –Zidane
Dajiye October 23, 2020
(Madrid) 23 Okt 2020. Macalinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa sheegay in uu la dagaalami doono ciyaartoyda ilaa dhamaadka, isaga oo tilmaamay in kabtanka kooxda ee Sergio Ramos uu ka soo muuqan doono liiska xiddigaha Los Blancos ee ka qeyb gali doono kulanka Barcelona ee El Clasico.
Barcelona ayaa bari ku soo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta Real Madrid garoonkeeda Camp Nou, si ay u wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan kulamada 7-aad horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan 2020/21.
Real Madrid ayaa kulankan soo gali doonta iyadoo ku jirto xaaladeeda ugu xun kaddib markii ay guuldarro la kulmeen labadii kulan ee ugu dambeysay ay la ciyaareen kooxaha Cadiz iyo Shakhtar Donstek ee tartamada La Liga iyo Champions League.
Haddaba Zinedine Zidane ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka barri ee El Clasico, waxaana ka mid ahaa waxyaabihii uu ka hadlay:
“Waa El Clasico gaar ah, laakiin El Clasico waa El Clasico, maadaama ay aheyd ciyaar qof walba ay la socotay”.
“Sergio Ramos waa kabtankeena, runtiina wax khatar ah ma gelin doono, wuu nala joogi doonaa kulanka barri”.
“Waxaan dooneynaa inaan bedelno xaalada hada taagan, waxa aan dooneyno inaan sameyno waa inaan ciyaarno ciyaar wanaagsan, tanina waa waxa aan isku dayi doono inaan sameyno berry”.
“Waxaan haatan ka shaqaynayaa sidii aan si fiican ugu diyaar garoobi lahaa ciyaarta, si aan si fiican ugu bilaabano oo aan si adag ugu ciyaarno, haddii aan si sax ah u dhaqan galino qorshaha, waxaan heli doonaa kalsooni”.
“Waan la dagaallami doonaa ciyaartoyda ilaa iyo heer dhimasho, maxaa yeelay markasta waan la joogaa iyaga, taas badalkeedana waa inay dagaalamaan, waxa kaliya ee aan u baahannahay waa inaan muujino tayadeena iyo shakhsiyaddeena garoonka dhexdiisa”.
“Waxaan heysanaa dhiirogalin, ciyaartoyduna had iyo jeer waxay rabaan inay wax saxan sameeyaan, laakiin mararka qaar arrimuhu uma socdaan sida aan rabno, wax isbadalay ma jiraan, waxa aan doonayo inaan qabto waa shaqadeyda, wax walbana waxaan siinayaa kooxda”.
Ronald Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Kooxdiisa Barcelona uga qeyb galaya kulanka Real Madrid ee El Clasico
Zidane oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Kooxdiisa Real Madrid uga qeyb galaya kulanka Barcelona ee El Clasico